Gịnị bụ ọhụrụ si Jo Nesbø. Na mgbụsị akwụkwọ Onye nketa na ... ga-alaghachi Harry Oghere | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nnukwu parish nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi nke Jo Nesbø ka nọ na afọ a. N'ọnwa Eprel anyị nwere Macbeth na na october na-aga ahịa Onye nketa (ntụgharị -ma ọ bụ mkpebi nke onye editọ- ọ bụ n'efu maka aha mbụ, Sonnen, dị mfe dika Nwa). Agụrụ m ya n’onwe m n’oge ya na Ana m akwado ya site ugbu a gaa n'ihu.
Na afọ na-abịa, na julio, ihe nkwụnye ọkụ na-alaghachi (n'ihi na ọ ga-agba ọkụ) kọmishọna Harry oghere na ya akụkọ nke iri na abụọ, Knife (Agaghị m anwa anwa ịsụgharị, mgbe ahụ, ihe na-eme, mana maka oge na n'ụzọ nkịtị ọ bụ Mma). Ka ahụ kedu ihe ha gbasara di na nwunye ọhụrụ a ma nwee olile anya na ha ga - ebipụta akwụkwọ akụkọ abụọ ndị ọzọ na - esighi na Nesbø: Ọbara na snow y Anyanwụ etiti abalị.
Mgbe nile ndị na-agụ Actualidad Literatura ga-amarịrị gbasara m akụkọ ifo na ịhụnanya miri emi na egwu egwu a, Ọ bụ azụ shark, onye na-agba ọsọ nke ọma (ọ na-agbanye mmiri n'oge ọkọchị niile n'akụkụ ndị ahụ nke ala ya) yana onye isi akwụkwọ akụkọ mpụ. O doro anya na ọ bụghị ihe ijuanya na atụfuru m uche m mgbe m na-ekwu maka ya. N'ebe ahụ ka ha na-aga mmetụta m nwere maka ihe na-abịa na ihe na-efu efu.
1 Onye nketa
1.1 Kedu ihe ọ bụ
1.2 Ihe m chọtara
3 Yabụ ...
El onye nketa
Nke na-esote na-ere ere 11 maka October na bụ nke abụọ nọọrọ onwe ha akwụkwọ mgbe Ndị isi. E bipụtara ya na 2014, ya mere ọ bụ oge m nwetara ụzọ a. Gịnị banyere nsụgharị aha Ekwuola m ya. Oge ụfọdụ, mkpebi ndị editọ ịgbanwe nke mbụ na-atọ ọchị, nke dịịrị onye ode akwụkwọ, maka onye ma njirisi. Na mgbakwunye, na Nesbø ruo ugbu a ha asọpụrụla aha mbụ ha. Na agbanyeghị…
Onye bu uzo bu Sonny lofthus. Ọ dị afọ iri atọ ma ọ dị afọ iri na abụọ nke ndụ ya nọ n'ụlọ mkpọrọ maka mpụ ọ na-emeghị. Kemgbe ahụ, ọ na-eri ahụ heroin nna ya kpebiri igbu onwe ya tupu a họrọ ya dị ka onye rụrụ arụ cop. Sonny nwere nsogbu ma mesịa nọrọ n'ụlọ mkpọrọ.
N'ebe ahụ ọ na-aghọ a ụdị guru ma ọ bụ nkwupụta nke ndị mkpọrọ ndị ọzọ, mana ọ bụkwa ebe ọtụtụ ndị lebara anya: ndị isi na onye nlekọta, ndị uwe ojii, ndị ọka iwu… Ha niile chọrọ ka ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. Karịsịa, onye isi mpụ kachasị mkpa na Oslo.
Otu ụbọchị, otu onye n’ime ndị mkpọrọ ahụ gwara Sonny Ihe dị ezigbo mkpa banyere ọnwụ nna ya. So Sonny kpebiri nke ahụ nwere elope ihe obula. Ọ ga-eme ya n'otu n'ime usoro ndị ahụ nke yiri ka ọ gaghị ekwe omume na ụghalaahịa nke ụlọ Nesbø. Mgbe ahụ chee echiche banyere ịchọ ịbọ ọbọ n’ego ọ bụla, site na ifo ruo na ndị mmanye iwu dị elu, yana nyocha ọzọ ihe mere. Ma ha na-akpagbukwa ya. Ha na-aga n'ụzọ ha ga-agafe Simon Kefas, onye agha ochie nke marakwa eziokwu banyere Sonny, na ịhụnanya nke nwa agbọghọ nke ahụ ga-enyere gị aka.
Ihe m chọtara
Enwere mgbe niile nzuzu nke ndị na-agụ akwụkwọ kachasị raara onwe ha nye ma raara onwe ha nye mgbe onye edemede a na-ede akwụkwọ nke ọma nwere usoro agwa kpebiri gbanwee nke atọ ma jiri akụkọ ndị ọzọ pụọ. Nke ahụ bụ ihe na-eme Nesbọ. Oghere Harry ya bụ ihe okike buru ibu ma gbaa gburugburu na ọ gaferelarị na nke na-ekpuchi (ma ọ ga-ekwe omume ikpuchi ugbua, ma Nesbọ chọrọ ya ma ọ bụ na ọ chọghị) ihe ọ bụla ọzọ m dere.
Ọ mere na Ndị isi (mgbanwe nke olu akụkọ nye onye mbụ, akụkọ dị ka nke mbụ, onye dị iche iche dị iche iche ...). Ma ọ mere ọzọ na Macbeth, que kewara ndị kwesịrị ntụkwasị obi ya n'echiche ndị na-emegiderịta onwe ha. Ọ bụ ihe kwere nghọta. Mana n'ezie, Macbeth bụ Macbeth ma Nesbø echepụtaghị ihe ọ bụla, ọ sọkwaara ya n'ụzọ nke ya. Nke a nwere ike ime ọzọ na Onye nketa na ndị a ka ga-ebipụta, akụkọ dị mkpụmkpụ karịa na ndị dị iche na ndị uwe ojii na-adịghị ahụkebe nke Norwegian.
Enwere m ike ikwu nke ahụ Onye nketa Ahụrụ m ya n'anyaotú m masịrị ha Ndị isi, Ọbara na snow y Anyanwụ etiti abalị. Ihe ọ bụla yiri m ọzọ nnukwu akụkọ na ụdị ụlọ Nesbọ. Na ntụgharị ya, ụmụ mmadụ nke odide ya, nke a kpara nkata na ịhụnanya miri emi na-adabere ihe niile. Ee, Harry anọghị ebe ahụ, mana ọ dịghị mkpa. Enwere ndụ karịrị ya, enwere akụkọ ndị ọzọ. Ha ruru ya n’ihi na ha si Nesbọ.
Ọzọkwa, na dị obi umeala Enwere m ike ikwu site n'echiche onye edemede, site n’oge ruo n’oge anyị kwesịrị ịgbanwe mgbawa, chee echiche maka ihe ọhụụ na imepụta ụwa ọhụrụ. Ma ọ bụkwa eziokwu na anyị enweghị ike ịmasị mgbe niile ma anyị nwekwara ike imechu ihu. Ajụjụ bụ na anyị chere ya. Ndị ode akwụkwọ a guzobere nwere ya karịa ka e chere. N'ezie, enwere m nwoke a nke ọma.
Ma dịkwa mma, ọ dịghị onye na-echegbu onwe ya. Ee, ọ na-alaghachi, ihe riri anyị ahụ nke ukwuu, nke anyị bụ Jim Beam: Harry. Ma ọ ga-abụ nke a Mma. Ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na ha mee otu ihe ahụ dị ka nke gara aga, mgbe ahụ aha ahụ ga-abụ Ọnụ ya, Ihe ịkpụ o Mma.
Ị nwetere ya. Ikpeazụ July Nesbø mara ọkwa na nke iri na abụọ Akwụkwọ akụkọ Harry Hole ga-apụ 11 2019 XNUMX. O doro anya na mmalite anyị hụrụ Harry na-eteta na a ogbugbu di egwu na obara ekpuchi aka na uwe. Nsogbu a na-eje ozi, ọ bụ ezie na anyị maara Oghere, anyị anaghịzi atụ anya na ọ banyere n'ime ihe kacha njọ. Okwu a, ugbua bụ ịhụ etu Nesbø ga-esi gafee (ọzọ) mgbe o mechara ka ihe okike a gabiga ọtụtụ arụrụala.
Ihe bụ eziokwu bụ na akwụkwọ ahụ ga-ewetakwa azụ onye iro ochie na-egbu egbu nke Harry. O yiri ka ọ dị ịtụnanya na ọ nwere nke ọ bụla hapụrụ ndị ọ nwere. Mana echiche ekwensu ahụ na nke gbagọrọ agbagọ nke na-egosi ọdịiche dị n'etiti Nesbọ ga-aga n'ihu na-eke ya ihe kacha njọ Ọ bụ ezie na, dị ka ndị anyị na-asọpụrụ onye na-ezughị okè na-ezughị okè, maara nke ọma, onye iro ya nke gbara ọchịchịrị ga-abụ onwe ya.
Onweghị ihe, ichere na ịga n'ihu na-agụ Nesbø. N’enweghị obi abụọ, n’atụghị ụjọ maka ndakpọ olileanya, n’enweghị ajọ mbunobi. Na mgbakwunye, ọ kachasị mma ịmepụta echiche kachasị dabara adaba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Gịnị bụ ọhụrụ si Jo Nesbø. N'oge mgbụsị akwụkwọ Onye nketa na… ga-alaghachi Harry Oghere